उपलब्धीहीन भारत भ्रमण र कांग्रेसी कलह | BIVAS
← ह्विलचेयरको भरमा गुडिरहेको जीवन
न औषधी न राहत, खै कहां छ सरकार ? →
उपलब्धीहीन भारत भ्रमण र कांग्रेसी कलह
अमर ओली ‘अग्नि’
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भारतको मैत्रीपूर्ण भ्रमण सम्पन्न भएको छ । वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर, नेपाललाई भारतीय सरकारद्वारा केही आर्थिक सहयोगबाहेक ५ दिने भ्रमणका क्रममा खासै त्यस्ता उपलब्धिपूर्ण कुनै काम भएका छैनन् । त्यसैले प्रमको भारत भ्रमण “बांदरलाई कसार र फर्सीलाई बेसार”झैं औचित्यहीन र बेकम्मासिद्ध भएको छ । भारतले केही आर्थिक सहयोग गरेकै कारण सरकारका मन्त्रीहरु अपेक्षाकृतरुपमा भ्रमण सफल भएको दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । भ्रमणको शिलशिलामा उठाइनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुनै छलफल नै गरेनन् ।
भारत भ्रमणको चरणमा भारतीयद्वारा लगातार भइरहने सीमाको ज्यादति र सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई दह्रोरुपमा उठाउनुपर्थ्यो तर त्यस’bout न त प्रधानमन्त्रीले कुनै भारतीय अधिकारी र नेताहरुसंग छलफल गरे न त त्यस’bout कुनै सहमति नै गर्न सके । यसकारण भारतीय प्रभुहरुको ग्य्राण्ड डिजाइनमा बनेको सरकार यथास्थितिवादको नै पक्षपोषक भएकोमा शंका गरिरहनुपर्ने छैन। सरकारमा संशोधनवादीदेखि प्रमुख यथास्थितिवादी दलहरु सहभागी भएकाले पनि सरकारले गर्ने काम त्यस्तै प्रकृतिको भएको हो । खासमा भ्रमण नेपाली जनताको लागि कुनै नौलो भएन । भारत भ्रमणका क्रममा जलविद्युतको मुद्वालाई उठाइने प्रचार गरियो, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने जमर्को गरियो । भ्रमणको प्रक्रियामा यस’bout सामान्य कुराकानी भएतापनि नेपालमा जाडोताका हुने १६ घन्टे लोडसेडिङलाई हटाउन द्विपक्षीयरुपमा कुनै कदम चाल्ने संकेत देखिदैन । माधव नेपालले भारतका व्यवसायीहरुलाई नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह मात्र गरेका छन् । एउटा छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा गएका बेला कमसेकम नेपालको हितमा हुने गरी एउटा सहमति गर्न सक्नुपर्थ्यो । दुई राष्ट्रहरुबीच कुनै पनि प्रकारको सहमति हुन्छ भने त्यो दुवै मुलुकको हितमा हुनुपर्छ । एमाले सरकारमा रहंदा गरेको महाकाली सन्धिलगायत असमान सन्धि सम्झौता खारेजीको लागि कुटनीतिक तहबाटै पहल थाल्नुपर्ने हो । देशमा अलिकति रहेको ढुकुटीलाई रित्याउने तर देशको आन्तरिक हितमा कुनै कार्य गर्न नसकेको कारण प्रधानमन्त्रीको मैत्रीपूर्ण भनिएको भारत भ्रमण उपलब्धिहीन भएको छ । भ्रमणको प्रारम्भिक चरणमा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले जेसुकै बहानामा भएपनि विदेश भ्रमणमा नजानुले कांग्रेसमा व्यापक आन्तरिक कलह त निम्त्याएको छ नै वर्तमान सत्ता समीकरण जुनसुकै बेला परिवर्तन हुनसक्ने समेत देखिन्छ ।
असंवैधानिक तवरले निर्मित वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेको प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस जसरी भएतापनि एकपछि अर्को गर्दै पार्टीहरुलाई उपयोगितावादको रणनीतिमार्फत् प्रयोग गर्ने र अन्ततः सबैलाई विस्थापित गरि आफ्नो एकलौटी नेतृत्व स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । त्यसको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नी पुत्री सुजाता कोइरालालाई प्रयोग गर्दैछन् । भारत भ्रमणको शिलशिलामा परराष्ट्रमन्त्री सुजाताको भ्रमणमा सहभागिता नहुनु, त्यसपछि आएका सुजाताका अभिव्यक्तिहरु र पार्टीभित्र सुजाताको भारत भ्रमण प्रकरणलाई लिएर चलेको बबण्डरपछि झनै कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह चुलिएको छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै माधव नेपाल सरकार कोइरालाकृत हुनेमा कुनै शंका छैन । यसले जसरी भएपनि परिवारमा र समग्र राजनीतिमा वंशवादलाई हावी गर्न खोज्ने गिरिजाप्रसादको अभिष्ट पूरा हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एकीकृत माओवादीलाई संविधान निमार्णमा वञ्चित गर्न खोजेमा देशमा फेरि एउटा आंधीमय विद्रोहको श्रृष्टि हुन्छ भन्ने कुरा गिरिजाले बुझेका छन् । तापनि पार्टीको नेतृत्वदायी पदमा पुत्री सुजाता आएको देख्ने उनको सौख छ । साथै सरकारमा समेत त्यस्तै भूमिका कायम गर्न उनी प्रतिवद्ध देखिन्छन् । जसको पछिल्लो कडी भनेको सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री पदका निम्ति आएका अभिव्यक्तिहरु नै हुन् ।
“जेरो इन वान्” अर्थात् केन्द्रतिरको राजनीतिमा आफ्नी पुत्री सुजातालाई ल्याएर मात्र आफू राजनीतिबाट सन्यास लिने कांग्रेस सभापति कोइरालाको मनसाय छ । भारत भ्रमणकै प्रसंगमा पार्टीभित्र सुजाताको चर्को आलोचना हुनु, उनको राजीनामा समेत मागिएका खबर आउनु र अरु कनिष्ट नेताभन्दा सुजाताले आफूलाई वरिष्ठ देखाउन खोज्नुले त्यही संकेत गरेको छ । रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, नरहरि आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी आदि प्रभावशाली नेताहरुभन्दा पछाडिकी मानिने गिरिजा पुत्रीलाई सरकारमा पठाउादादेखि भारतले दाङमा गरेको सीमा अतिक्रमणका ’boutमा आएका अभिव्यक्ति हुंदै भारत भ्रमणसम्मका यावत कार्यहरुमा गिरिजालाई उनको शैलीको विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । यसो हुनुको कारण के हो भने सरकारमा सुजातालाई सहभागी गराउनु हुंदैन भन्दाभन्दै पार्टी सभापतिको नाताले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अधिनायकवादी शैलीमा आफ्ना पुत्रीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका थिए । यति विरोध हुंदाहुंदै पनि गिरिजा आफ्नो उद्देश्यमा प्रतिवद्ध नै छन् । शुरुमा सरकारमा सहभागिताकै प्रसंगमा जुन ठूलो मतभेद पार्टीमा सिर्जना भएको थियो, त्यस्तै मतभेद अहिले कांग्रेसमा बढेको छ । कतिपय नेताहरुले यसलाई लज्जाजनक समेत बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र नरहरि आचार्य लाइनका नेताहरु पराराष्ट्रमन्त्रीबाट सुजातालाई हटाउनुपर्ने अनि पार्टीमा कार्वाही गरिनुपर्ने धारणा राख्नुले कांग्रेसमा सत्ता समीकरणलाई लिएर नै गम्भीर अन्तर्द्वन्द्व रहेका आभाष मिल्छ । यदि स्वास्थ्यको कारण नै थियो भने त सुजाता अझ भारत जानुपर्थ्यो ’cause केपी ओली, गिरिजाप्रसाद र उनकी पुत्री यदि विरामी भइहाले भने उनीहरु नेपालमा नभएर स्वास्थ्य उपचारका भारत नै जाने गरेका थिए ।
के परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको भ्रमणमा नगएर कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गरेकी हुन् त? के उनले भनेझैं स्वास्थ्यको कारण देखाएर मात्र सो भ्रमण रद्ध गरिन् होला? यी प्रश्नहरु चारैतिर उब्जिएका छन् । सुजाता भारत भ्रमणमा नगएलगत्तै चारैतिरबाट उनको चर्को आलोचना भयो । कतिपयले कांग्रेसले कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको बताएका छन् । कांग्रेसभित्रै यही मामलालाई लिएर अझैं बहस चलिरहेको छ । यसकारण भारत भ्रमणले कांग्रेसभित्र र समग्र तासको घरजस्तो वर्तमान सत्ता समीकरणमा जुनसुकै बेला पनि अस्थिरता आउन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
Posted by CHINTAN on अगस्ट 25, 2009 in BLOG, GUEST
One response to “उपलब्धीहीन भारत भ्रमण र कांग्रेसी कलह”
अगस्ट 26, 2009 at 1:12 बेलुका
अरू जे जे भएपनि हतियार ल्याउने भै हाले क्यारे कामरेड के असफल भ्रमण भन्नु र ?